फोनको ब्याट्री कसरी बचाउने? यी हुन् पाँच तरिका (भिडिओ) :: Setopati
फोनको ब्याट्री कसरी बचाउने? यी हुन् पाँच तरिका (भिडिओ)
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, साउन १३
पछिल्ला दशकमा स्मार्टफोनका फिचरमा धेरै परिवर्तन आएको छ। टच स्क्रिनदेखि बोलेरै चलाउन सकिने टेक्नोलोजी अपडेटले स्मार्टफोनको फड्को कहाँसम्म पुगेको छ भनेर देख्न सकिन्छ।
हाम्रा मोबाइलमा लाइट मोड र डार्क मोड भनिने दुई फिचर राखिएको हुन्छ। लाइट मोडले मोबाइलको डिस्प्ले उज्यालो बनाउँछ र डार्क मोडले अँध्यारो। लाइट मोडमा मोबाइल चलाउँदा ब्याट्री सकिने समस्या देखिरहेको हुन्छ र यसले आँखालाई पनि कमजोर बनाउँछ। त्यसैले प्रयोगकर्ताको आँखा र ब्याट्री बचत गर्नका लागि डार्क मोड वा डार्क ब्याकग्राउन्ड अन गर्नु उपयुक्त अप्सन हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १३, २०७८, १५:३९:००
न्याय माग्दै बाँकेबाट हिँडेर बुटवल पुगे १४ जना, पैदलै काठमाडौं जाने
सामसङको नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी ए–१३ ५–जी’मा हुनेछन् यस्ता फिचर
विश्वभर आइफोन चलाउनेको संख्या पुग्यो दुई अर्ब
उत्कृष्ट ६ स्मार्टफोनको सूचीमा रियलमी